Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha Ururka Haweenka Ogaden iyo Xubno ka qeyb galay shirweynihi Xaquuqda Haweenka lagu dhawrayay
Posted by ONA Admin	/ June 12, 2014
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Somalida Ogadeniya Marwo Roosa Cabdiraxmaan iyo xubna kasoccda Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee London iyo Ururka OYSU UK ayaa ka qeyb galay shirweynihii lagu hor istaagayay tacadiyada loo geysto haweenka tacadiyadaas oo isugu jira Kufsiga iyo jidh dilka, cabudhinta loo geysto Dumarka.
Xubnahan ka socda Jaaliyada Somalida Ogadneiya oo ay hoggaaminayso Marwo Roosa Cabdi raxmaan ayaa ka qeyb galay kulamo badan oo ka Socday Guriga weyn ee ExCel oo lagu qabanayay shirweynaha lagu ilaalinayo xaquuqda Dumarka, iyo kulamo kale oo goos goos ahaa oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka UK (House Of Common).
Marwo Rosa iyo xubnaha Jaaliyada London kasocday kulamadan ay ka qeyb galeen waxay kusoo bandhigeen doodo ay kaga hadlayaan dhibaatada iyo waxyeelada loo geysto Haweenka Somalida Ogadeniya oo Ciidamada Gumeysiga Ethiopia u geystaan jildh dil, kufsi, xabsi iyo ciqaabo aan horey uga dhicin caalamka. Waxaana loo qeybiyaya gudiyadii kala gadisnaa ee kakala yimid caalamka Filimaan ka waramaya dhibaatada haweenka Somalida Ogadeniya soo gaadha ee kufsiga leh, filimadaas oo ka waramaya sida gumeysiga Ethiopia ugu adeegsado kufsiga hub ahaan. Waxaa kale oo Gudomiyaha Ururka haweenka Somalida Ogadeniya shirkan nasiib ugu sameeyay sidii ay u baran laheyd 80 haayadood oo ka shaqeeya dhibaatada haweenka, kuwaas oo dhanaamtood balan qaaday inay haweenka Somaliyeed gaar ahaan haweenka Somalida Ogadeniya ay ka diyaarin doonaan mashruucyo lagu bad baadinayo haweenka Somalida Ogadneiya kuwa dhibaatadu soo gaadhayna loogu gar gaari doono sidii ay uga bix lahaayeen waxyeeladii soo gaadhay.
Shirkan lagu qabtay London oo ahaa kiisii ugu horeeyay ee caalamka ka dhaca, looguna doodayo sidii haweenka aduunka looga bad baadin lahaa tacadiyada foosha xun ee kasoo gaadha wadamada ay ka socdaan daggaaladu ayaa jaanis weyn u noqday Jaaliyada Ogadeniya ee UK sidii ay iyana u tabin lahaayeen dhibaatada haweenka Somalida Ogadeniya soo gaadha.
Dalka Ethiopia oo si fiicana uga warqaba waxyeelada uu u geysto haweenka Somalida Ogadeniya ayaa shirkan ka gaabsaday oo aan kasoo qeyb galin. Waxaana su’alo badan laga weydiiyay ururkii qaban qaabinayay shirkan sababta Ethiopia cadaadis loo saari waayay si ay shirkan uga soo qeyb galaan. arrintan ayaa jawaabteedii ay wali sugayaan jaaliyada Ogaden ee UK. Waxaase la filaya in Maalinta bari ah wafti kasocda gumeysiga Ethiopia oo heerkiisu aad u hooseeyo inay kasoo qeyb galaan kulanka lagu saxeexi doono Qaraarka lagu hor istaagayo danbiilayaasha. cidkasta oo haweenka wax u geysata sidii loo horkeeni lahaa maxkamad oo hada waxii ka danbeeya aysan u dhicin in haweenka inta la kufsado qofkii danbigaas geystay uu san si nabad galyo ah wadooyinka uusan u marin balse xabsi loo taxaabo danbiilahaas.
Ururuka OYSU ee UK ayaa sidoo kale barnaamijkan ka qeyb galay iyaga Filimaan laga duubay, wargeyso badana laga waereystay.
Jaaliyada Ogadeniya ee UK ayaa maalinta Bari ah Banaanbax aad u weyn ku qaban doonta xarunta Excel halkaas oo Wasiirada wadamada Aduunku isugu imaan donaan si ay u saxeexaan qaraaro looga hortagayo wadamada ciidamadoodu ka qeyb qaataan waxyeelada haweenka.